‘दोस्रो चरणको निर्वाचन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सफल’ « News24 : Premium News Channel
Posted By News24Nepal.TV || Date: 8 July, 2017
काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भर्खरै सम्पन्न भएको दुई चरणका स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पाठ सिकेर आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा निकै सुधार ल्याइने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचनका लागि आयोगलाई हर क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको छ । आयोगलाई कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो त निश्चित रुपमा भएकै हो । वैशाख ३१ मा एकै चरणमा भए प्रकृतिको प्रतिकूलता व्यहोर्नु नपर्ला र सजिलोसँग राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने अनुमान गरेका थियौं, राजनीतिक वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा जेठ ३१, असार ९, १३ हुँदै १४ गतेका लागि सरेपछि ज्यादै अप्ठेरो परिस्थितिमा परेका थियौँ । मौसमको प्रतिकुलता प¥यो भने अप्ठेरो हुन्छ भन्ने थियो । त्यसपछि पनि राजनीतिक दलबीच निर्वाचनप्रति सहमति, असहमति निरन्तर चलिरह्यो । त्यस संवादबाट एउटा राम्रो सन्देश प्राप्त भयो र सबैको सहयोगबाट मिति सरेर पनि अत्यन्तै शान्तिपूर्ण र स्वच्छ वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । वर्षायाम सुरु भएपछिको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान हुनु भनेको इतिहासकै ठूलो उपलब्धि हो, अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनमा यस्तो भएकै थिएन ।
‘पाँच वर्ष भित्र बिकासको अनुभूती गराएरै छोड्छौँ’
के मायामा परेका छन् गायक राजेश पायल राई ? (फन-टक)
सुरक्षाको लिपिष्टिक काण्डः सम्झिएर लजार्इन किन ? (भिडियोसहित)
आन्तरिक तयारी बिनानै गरिएको चीन भ्रमण उपलव्धिमुलक नहुने (भिडियोसहित)